Resign ၏ နောက်ကွယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Resign ၏ နောက်ကွယ်
Resign ၏ နောက်ကွယ်
Posted by Kaung Kin Pyar on Aug 18, 2014 in Arts & Humanities, Cultures | 38 comments
ကျမ…Resign တင်လိုက်ပြီ သတင်းကြားတော့ ရုံးကလူတွေ တိုးတိုးတစ်မျိုး၊ ကျယ်ကျယ်တစ်မျိုး၊ ဖုန်းနဲ့တစ်မျိုး၊ messageနဲ့ တစ်မျိုး၊ Check Box ကတစ်မျိုး မေးကြတယ်…။ သူတို့မေးသမျှ အတူဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကို ပြောပါဆိုရင်….”ဘာလို့ထွက်တာလဲ ဆုရယ်….” ဒါအမြဲပါတယ်…။ ဒါဖြေဖို့မလိုထင့်…။ အငေါ်တူးပြီး ဖြေရရင် မလုပ်ချင်လို့ ထွက်တာ…ဒါပါပဲ…။
အရင်မေးထူးခေါ်ပြောအပြင် ပိုမခင်တဲ့ တစ်ယောက်ကလဲ…အသဲအသန်လိုက်ရှာပြီး အပြင်မှာတွေ့ရအောင်ပါ၊ တစ်ရက်လောက်ချိန်းပြီး စကားအေးအေးဆေးဆေးပြောချင်သေးတယ်တဲ့….(သူက ဒီ Company Group ထဲက တခြားကုမ္ပဏီခွဲရဲ့ ကျမနဲ့ Dept; တူသူပါ…) ။ ဘာအတွက်လဲ….??? ကျမ မျက်ခုံးလှုပ်ပါတယ်…..။
ရှိစဉ်တုန်းက တွန်းလိုက်မဟဲ့ကြံသူတွေ….ထွက်မယ်သတင်းကြားမှ…စိတ်မကောင်းခြင်းမျက်နှာဖုံးတွေစွပ်ရင်း ပွတ်သီးပွတ်သပ်လာလုပ်ချိန်တိုင်း…လူ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကြီးကို ကျမအချဉ်ပေါက်မိတယ်….။ သူတို့ကို ပြန်ပြုံးပြရတာလဲ…အပြုံးစစ်စစ်မဖြစ်နိုင်လို့တော့ စိတ်မကောင်းပါ…..။
အဲ့ဒီ သူတို့တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ….
ကျမထွက်ရင် ပိုဝန်ပိမယ့် ကျမအလုပ်တွေအတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ စိုးရိမ်ပူပန်သူတွေ…..
“အာ့တွေ အရင်က မလုပ်ဖူးဘူးနော်….၊ ဘယ်နားလေးထိ ကူညီသွားပေးပါ” ဆိုတဲ့…ခူးပြီးခပ်ပြီး ချက်ပြီးသား ထမင်းလုတ်အတွက် ခွံ့ကျွေးဖို့ တောင်းဆိုသူတွေ….
“ဟိုမှာ အခြေအနေကောင်းရင် လက်တို့လိုက်ပါဦး”ဆိုတဲ့ အချက်ပေးမှုတွေ….
“လူစားထိုးမှာလားဟင်…” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့နောက်က သူတို့ အသိ၊ သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုးမကင်းသူတွေအတွက်…လိုချင်လောဘတွေ…….
ကျမ အခုရနေတဲ့အပြုံးအတုတွေထက်…ငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့ နယ်မြို့လေးကလူတွေရဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်ရင်တောင် ပေါ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ခပ်စစ်စစ်တွေကမှ၊ သူတို့ရဲ့ ဆဲသံဆိုသံတွေကမှ…ကျမအတွက် ပိုမက်မောချင်စရာကောင်းသေးတယ်….။
ပညာတတ်လူ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ…..အတုမှန်းသိသိချည်းနဲ့ ပြုံးပြရခြင်းဆိုတာလဲပါတယ်ဆိုရင်….အခု…ကျမစိတ်တွေ ခါးနေပါတယ်……..။
လောကမှာ ရန်သူစစ်စစ်နဲ့ မိတ်ဆွေစစ်စစ်ကို လေးစားနိုင်ပြီး
ဟိုမရောက် ဒီသွား ငဖော ငရှော ချောက်တွန်း ဖို့ ဝန်မလေးတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေယောင် ရန်သူ အတုတွေတော့ မလေးစားနိုင်ဘူးး
ဘယ်ဟာကအတု၊ ဘယ်ဟာကအစစ်မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး…မဇီရယ်…
ဒီပရက်စ် ဖြစ်နေတဲ့ ကင်းကောင်ပြာလေးကို မာဆက်ခ်ျ နှိပ်ပေးချဉ်သယ်…
ပြောလိုက်ပေါ့ ညီမလေးရယ်… တစ်ရွာ မပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်လို့ ဟုတ်ဖူးလား….:mrgreen:
ပြောတော့ပြောလိုက်သေးတယ်…။ သိပ်တော့ မပြောရဲဘူး… ။ သေချင်တဲ့ကျားကြီးထွက်လာမှာစိုးလို့..
မှန်လိုလေ ကောင်းကင်ပြာရယ်။ ဒီလိုခံစားချက်မျိူး တူညီစွာ ခံစားဘူးပါကြောင်း
ဒါလေးဖတ်မိတော့ ကွကိုယ် ပြောမိတယ်…
I.Q ရော၊ E.Q ရော လိုနေပြီထင့်….
“စာတော်တဲ့သူ။ ကျောင်းမှာ ထူးချွန်တဲ့သူဆုို ရင် I.Q မြင့်တယ်တယ်လုို့ ပြောကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်။ ၁၅ နှစ် လောက်ကစပြီး E.Q ဆုိုတာ ခေတ်စားလာတယ်။ E.Q ဆိုတာ Emotional Quotient ။လွယ်လွယ်ပြောရင် မိမိရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်။ တနည်း စိတ်ရင့်ကျက်မှု အညွန်းကိန်းပေါ့။ ဘာလုို့လဲဆိုတော့ အောင်မြင်တဲ့ သူတွေ ရဲ့I.Q ရော၊ E.Q ရော တုိုင်းကြည့်တဲ့ အခါ I.Q မြင့်တဲ့သူတွေထက် E.Q မြင့်တဲ့သူတွေဟာ ဘ၀မှာ ပို အောင်မြင်တာ တွေ့ရတယ်။
ဆုိုလိုတာက ဘ၀မှာ အောင်မြင်ဖုို့ဆုိုရင် ဥာဏ်ကောင်းဖို့ ထက် စိတ်ဓါတ် ရင့်ကျက်၊ ခုိုင်မာမှုက ပိုအရေး ကြီးတယ်ဆုိုတဲ့ သဘောပေါ့ ။”
အဆင်ပြေသွားမှာပါ..ကျုပ်အတွေ့အကြုံအရကတော့ ပြောင်းလိုက်ရင် ပိုပိုကောင်းတတ်ပါတယ်
အလယ်ကျကျ နှလုံးသားနဲ့ ခံစားကြည့်မှ
အတု အစစ် ဆိုတာ တကယ်ကွဲပြားကြတာ ကလား …
တစ်ခါတစ်ခါ ကျတော့ ကိုယ်အညင်ကပ်လှသူ တစ်ယောက်ကလည်း
နောက်ကွယ်မှာ ကိုယ့်ကို ထောက်ကန်ပေးသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေတတ်ပြန်သေးတယ်
တစ်ခါတစ်ခါ ကျတော့လည်း ကိုယ်ချစ်လှပါသူ တစ်ယောက်ကလည်း
နောက်ကွယ်မှာ ကိုယ့်ကို နှစ်ပြားမတန် ဖြစ်စေတတ်ပြန်သေးတယ် …
အင်း .. အတုနဲ့ အစစ်မှာ ချိုတွေ မပါလာတော့လည်း အခက်သားကလား …
မုန်းတဲ့သူ အခါတစ်ရာသတ်လဲ တစ်ခါသေချင်မှ သေမယ်…
ချစ်တဲ့သူ တစ်ခါသတ်တာကတော့ အခါတစ်ရာသေသွားသလိုပဲ ဖြစ်မယ်ကိုအံစာရေ….
ဒါကြောင့်…ချစ်တဲ့သူက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူလဲ ဖြစ်တတ်သေးတယ်…။
အကောင်းဆုံးအတွက်ပဲ ကြိုးစားမှာပါ…။ ကောင်းဖို့ပဲ မျှော်ပါတယ်…ဦးကြီးမိုက်ရေ….
အဲလိုမျိုးတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ် …
အထူးသဖြင့် ပညာတတ်တွေများတဲ့နေရာတွေမှာ ပိုလို့ပေါတယ် ..
resign လုပ်တဲ့အခါ အရှုံးပေးပြီးထွက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဒီ့ထက်သာတာရှိလို့ ထွက်လိုက်ရတာဆိုရင်တော့ ခေါင်းမော့ပြီးထွက်လို့ရတယ် …
ဒါပေမယ့်…မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ မျက်နှာတွေကို သိသိချည်းနဲ့ ပြုံးပြုံးပြရတိုင်း…စိတ်ထဲ တစ်မျိုးကြီးတော့ ဖြစ်မိတယ်…။
ဒါဆို ဆိတ်လွတ်၉လွတ် ချောင်းသာ သွားကဲရအောင် ကင်းကောင်ဘီလူးလေး
ဘာနဲ့မှ မတူအောင် အဲ့ဒီအရသာက ဆိုးရွားပါတယ်။
လျှာပေါ်တင်လို့ခါးတဲ့အရသာက သိပ်မကြာခင် ပျောက်ပါတယ်…
စိတ်ထဲထိ ခါးသွားတာကတော့ ကိစ္စပေါ်မူတည်ပြီး…အချိန်ယူရမှ ပြန်ပျောက်တယ်..ဆက်ဆက်ရေ…
တကယ်လဲ ဘာနဲ့မှမတူအောင် အဲ့ဒီအရသာက ဆိုးရွားပါတယ်…
အမ လည်းအခုတ​လော အလုပ်​​ပြောင်းဖို့ ကြိုးစား​နေတယ်​။ ဒီမတိုင်​ခင်​က ဘယ်​သူ​မေး​မေး ငါ ဒီပ​ရောဂျက်​ပြီးမှ ​ပြောင်းမှာလို့အမြဲ​ပြောခဲ့တာ။ စိတ်​ဖိစီးလွန်းလို့ ​နေ့လည်​စာ ​မစားဖြစ်​​တော့ဘူး။ မနက်​​တောင်​တစ်​ခါတ​လေ မစားဖြစ်​ဘူး။ အမ သ​ဘောကျတဲ့ အလုပ်​က သူတို့ရဲ့ ​ဆောင်​ပုဒ်​….
We go where others don`t,
We dare when others falter,
We complete what others left,
We are (……) People.
ဆောင်ပုဒ်လေးပါ ထည့်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ Iris ရေ….
Risk ကို မကြောက်ပုံပါပဲ..
ဟိုတစ်နေ့က မမနောရေးထားတာလေးမြင်တော့ ငယ်ငယ်က ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို သတိရသွားမိသေးတယ်…။
“လက်ညှိုးထိုးနိုင်သူ ဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ်…လက်မထောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ…”
ခု ပြန်တွေးကြည့်မိတော့ ရီချင်နေတယ်…
ဒစ်ပလိုမက်တစ်… ကိုယ်တွေကတော့ စိတ်မပါရင် အလကားရပြီး အပန်းမကြီးတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်ချက်တွန့်ဖို့ လက်ညှိုးတချက်နှိပ်ဖို့တောင် ဝန်လေးပါ့… :))
ကရင်တွေက အဲ့လိုပဲ မခွစ်စ်…..
ပြောင်းခြင်း မပြောင်းခြင်း တွေဟာ ကိုယ့်အတွက် ကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်း တွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုဘဲ ထို ပြောင်းခြင်းဟာ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ မကောင်းလည်းခံ ကောင်းလည်းစံ ဆိုသလို ကိုယ့်ကိုကျေနပ်တတ်ကြပေမယ့် တစ်ပါးသူ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကြောင့် လက်တဲ့စမ်းပြီးပြောင်းကြည့်တာမျိုးဆိုရင်တော့ မကောင်းခဲ့ရင် ပြောင်းလဲမှုအပေါ်နောင်တရတတ်တဲ့သဘောတော့ရိ်ှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောင်းလဲမှုဟာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ဖို့တော့လိုမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
လုပ်နေစဲ အလုပ်တစ်ခု ၀န်းကျင်တစ်ခုကနေ ထွက်သွားရင် အဲဒီလူ ဘာလဲ ဘယ်လဲကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ သိပ်သိချင်ကြတာလည်း ဓမ္မတာပါဘဲလေ။ ကိုယ်က ပါးနပ်ဖို့ ဖြေတတ်ဖို့ဘဲ လိုတာပါ။ ၀န်းကျင်အသစ်ကိုရဲ့ အခြေအနေဟာ လက်ရှိထက်ကောင်းနေတယ်လို့ ယေဘူယျ သိရင်တောင် ထိုးမယ့်ဆင်နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်ဆိုသလို စကားကုန်မပြောဘဲ မယုတ်မလွန်လေး ဘဲ လက်ရှိဝန်းကျင်ကို ပြောသင့်တယ်။ ကျွန်တော့ အယူအဆတွေပါနော်။
ကောင်းကင် ပြောတဲ့ အကြောင်း ကို ရင်ထဲ က ခံစား လို့ ရပါတယ်။
သူများ ကို မလို ဝန်တို စိတ် နဲ့ တွန်း သူ တစ်ချို့ ကို လဲ လက်တွေ့မြင်ဘူးပါရဲ့။
အဲလို လူတွေက သူတို့ မှာ ရှိတဲ့ အားနည်းချက် ၊ သူတို့ ရဲ့ မပြည့်ဝ တဲ့ အရည်အချင်းကို ဖုံးဖို့ အတွက် ဒီလို လုပ်ကြရတာပါ။
တကဲ့ ကို တော်တဲ့သူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိတဲ့ သူ တွေမှာတော့ ဒီစိတ်မျိုး ရှိခဲ ပါတယ်။
ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင် မှာ ဒီလို တွန်းတိုက် ပြီး မှ ထမင်းစားရမဲ့ လူ တွေ များ နေတာ ဆိုရင်တော့ အဲဒီ နေရာ ဟာ နေဖို့ မသင့်တဲ့ နေရာပါဘဲ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီလို စိတ်ဓာတ်မပြည့်ဝ ဘဲ အလုပ်လုပ် နေသူ တွေ များ တဲ့ လုပ်ငန်း က ရေရှည် အောင်မြင်ပါ့မလား။
လူတစ်ယောက် က တစ်ယောက် ကို မလို စိတ် နဲ့ တွန်း ပြီး နေရာ ယူ နေတာ ကို မသိ တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု က လဲ အထင်ကြီးစရာမရှိ နိုင် ဘူး။
လုပ်ငန်း ကို ဦးဆောင် သူ အသုံးမကျ လို့ ဒီလို နည်းနဲ့ အောက် က လူတော် တွေ အများကြီး ဆုံးရှုံး နိုင်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက် က ကြည့်ရအောင်။
အခုထွက်လိုက် တဲ့ နေရာ က နေ အသစ် နေရာမှာ ရော ဒီလို လူမျိုး တွေ မရှိ နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်လို သိပါ့မလဲ။
ပိုပြီး လဲ ဆိုး နိုင်ပါမယ်။
ကောင်းတဲ့ သူ တွေနဲ့ လဲ တွေ့နိုင်ပါမယ်။
ဘေးလူ မကောင်းတိုင်းသာ ထွက်ရမယ် ဆိုရင် ကိုယ့် အလုပ် လဲ ငြိမ်မှာ မဟုတ်တော့။
ဒီအတွက် လဲ ကောင်းကင် ဆီမှာ ကိုယ့်ဟာကကိုယ် အဖြေ ထုတ်ပြီး ဖြစ်နေပြီးသားပါ။
EQ – တစ်ချို့ကလဲ emotional intelligence လို့ ခေါ်တာဘဲ။
တကယ်တော့ emotion က ပြသနာ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါသဖြစ်လို့ ရတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျလို့ ရတယ်။ ပျော်နိုင်တယ်။ ဝမ်းနည်းနိုင်တယ်။
ပြသနာ က အဲဒီ emotion ကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ထုတ် လိုက် တဲ့ Negative အတွေးဘဲ။
ဒါကို Positive အသွင် စတွေးလိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာ လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို မကောင်း လုပ်တဲ့၊ ကြံတဲ့ သူရဲ့ နေရာ ကဝင်ကြည့်လိုက်ပြီး သူရဲ့ ခံစားချက် ကို နားလည် လိုက်ရင် ပြသနာက ကြီး မသွားတော့ ဘူး။
ကိုယ် က သာ ကိုယ့်ဟာကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိနေပါစေ။
Positive တွေးနိုင်ဖို့ လွယ်မယ် ထင်တာပါဘဲ။
အဲဒီ အတွေး က ကိုယ့်စိတ်ကိုလဲ အေးအောင်လုပ် နိုင်ပါတယ်။
သူများ နဲ့ ဆက်ဆံရာမှာလဲ ကောင်းတဲ့ဘက် ကို တွန်းပို့ပါတယ်။
ကောင်းကင် ပြောတဲ့ အပြုံးတု သမား ကို မြင်ပြီ ဆိုပါတော့။
သူ့ ကို ရှောင်ပြီး လဲ နေလို့ မရဘူး ဆိုပါစို့။
ကိုယ့်ဘက်က အပြုံးစစ် ကိုသာ ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ ပေးလိုက်ပါ။
သူ့ အပြုံး လဲ ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
အရီးတို့ ဘေးမှာ ပါတ်ဝန်းကျင် ရှိတယ် ကောင်းကင် ရဲ့။
တစ်ခါ တစ်ခါ ကိုယ်လဲ အဲဒီ ပါတ်ဝန်းကျင် ထဲ က ပွဲကြည့်သူ လူတစ်ယောက် ပေါ့။
တစ်ခါတစ်ခါလဲ ကိုယ်က ပွဲ က နေ သူ အကြည့်ခံ ပေါ့။
ဒီတော့ ကိုယ်က ကောင်းအောင်နေပြရင်း၊ သူများ ကောင်းတာ ကို အတုခိုးရင်း ကိုယ့်ကျင်လည် နေတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ကို ကောင်းအောင် ပြောင်းသွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြတာပေါ့။
သူမကောင်းရင် ငါလဲ မကောင်းဘူး ဆိုတာ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို လူတွေ က သူများ ကို ဦးဆောင်လို့ မရဘူး။
သူများ တွေ ကို ဦးဆောင်ချင်သူ ဆိုရင်တော့ သူမကောင်းလဲ ငါကောင်းတယ် ပုံစံ နဲ့ မှ တနည်း ဝင်း- ဝင်း အခြေအနေ ကို ဖန်တီး နိုင်မှ အောင်မြင်တဲ့ အခြေ တစ်ခု ကို ဦးဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်နိုင်မှာ ဟုတ်။
မနက်က ဖတ်ပြီး ရေးချင်တာ နဲ့ ချရေး နေလိုက်တာပါ။
အတွေးများ စရာ Post လေးအတွက် ကျေးဇူး ပါ ကောင်းကင် ရေ။
သူများ ကို ဒီလို ဆရာ ဝင်လုပ်ရတာ လွယ်သားနော်။ စိတ်မရှိနဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူများ တွေ ကို ဦးဆောင်ချင်သူ ဆိုရင်တော့ သူမကောင်းလဲ ငါကောင်းတယ် ပုံစံ နဲ့ မှ အောင်မြင်တဲ့ အခြေ တစ်ခု ကို ဦးဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်နိုင်မှာ ဟုတ်။…ဆိုတာလေး ဟိုက်လိုက်လုပ်ချင်တာရယ်…..အရီးရယ်..ကျော်တို့များကြီးသင်ယူရပါတယ် ။ အရီါ်နဲ့တစ်ရွာထဲရှိနေရတာကို ဂုဏ်ယူပါကြောင်း
သများ လဲ ကြိုးစား နေတုန်းပါ နုထွားကြီး ရယ်။
လိန်ပျံ မယ် လေး ရဲ့ ခြစ်ခြင်း တွေ အညားကြီး ရပါစေ။ lol:-)))
သများဖြင့် အချိန်ပိုင်းတောင် မဟုတ်ပါဘူး အရီးရယ်။
ကိုသစ် ပို့(စ) ကို ပြန်ဖတ်မိပြီး ကွကိုယ် အဲလိုသတ်မှတ်လိုက်မိတာ။
စေတနာအပြည့်နဲ့ ၀င်မန့်ထားတဲ့ Comment လေးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..အရီးရေ…
ကောင်းကင်ပြာလဲ…ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းသူရော၊ မကောင်းသူအပေါ်မှာပါ…စိတ်ထားတတ်အောင် သင်ယူနေပါတယ်…(နည်းနည်းတော့ ခက်တာပေါ့လေ…)
ကိုယ်တိုင်က အ၀ိုင်းလဲမဟုတ်၊ လေးထောင့်လဲမဟုတ်ဘဲ..အ၀ိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေးထောင့်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအသားကျသွားနိုင်မယ့်…ရေ လိုလူမျိုးပဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်….
ကချင်နုထွားကြီးရဲ့ စကားကိုပဲ ထပ်ပြောပါရစေ….
အရီးနဲ့ တစ်ရွာထဲ ဖြစ်ခွင့်ရလို့…ဂုဏ်ယူမိပါတယ်…
၀န်ထမ်းတစ်ယောက် .ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်..Resign လုပ်ပါပြီတဲ့ …အဲ့မှာ Exit interview လုပ်လားဟင်…
4) ကုန်ပဏီကိုကျောခိုင်းသလော ။ မန်နေဂျာကိုကျောခိုင်းသလော ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဝန်ထမ်းကိုကျောခိုင်းသလော ..
စသည်ဖြင့် မေးမြန်းရက်ကော့လုပ် …အနာဂါတ်မှာ လိုအပ်သမျှပြင်ဆင်…HR ပိုင်းက ….အဲ့မျိုးအဲ့မှာ…လုပ်ကြသလားမသိ.
ကျနော် resign လုပ်တုန်းကတော့ ဘောစ့်ကလုပ်သဗျ။
1) ဘာကြောင့်ထွက်သနည်း – အဆင်ပြေမဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးလိုက်တယ် (ဂဃနဏပြောရအောင်ကိုယ်ကလည်း E မကျွမ်း)
2)ဘာအဆင်မပြေတာရှိသနည်း – အရိပ်အမွက်လောက်ပြောပြခဲ့တယ် (သူများ personal
3)ဘာကိုပြင်ဆင်စေချင်သနည်း – နံပါတ် (2) မှာပြောခဲ့တာနဲ့ သူသိပြီ။
4) ကုန်ပဏီကိုကျောခိုင်းသလော ။ မန်နေဂျာကိုကျောခိုင်းသလော ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဝန်ထမ်းကိုကျောခိုင်းသလော – အဲ့ဒါတော့မမေး
5)သင်၏မန်နေဂျာကို မည်သည့်အချက်ပြင်ဆင်စေချင်သနည်း – အဲ့ဒါတော့သူတောင်ကောင်းကောင်း
သိသဗျ….မြန်မာနဲ့ နီးလို့ လားမသိ အားနာနာနဲ့ လွတ်ထားတာ..
ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိတာက Boss ရဲ့ လူကြီးပီသပုံ ချစ်စရာကောင်းပုံ…(မြန်မာတွေအတုယူစရာ)
ဒါတွေဟာသူ့ ရဲ့ management ညံ့ဖျင်းတာကြောင့်ဆိုပီးတောင်းပန်တယ်..
သူ့ ကိုအချိန် ၂ပါတ်လောက်ပေးပါ သူ system ပြောင်းပါ့မယ်ပြန်စဉ်းစားပါအုန်းလို့ ပြောသဗျ..
ကိုယ်ကလည်း ဒီလူတွေ နဲ့ ဘယ်လိုမှဆက်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ထွက်ခဲ့တယ်..
ရလဒ်ကတော့ နောက်လူတွေ ကိုယ်ဖေါက်တဲ့လမ်းပေါ်ကောင်းစားသွားတာပဲ..
ဆိုတော့ ကောင်းကင်ပြာရေ ကြုံဖူးလို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်…။
ဒီမှာရော…အရင်အလုပ်မှာရော…Exit Interview လုပ်ပါတယ်…ကိုဆောရိုး…
Form ပုံစံတွေကွာပေမယ့်…လိုရင်းအချက်အလက်တွေကတော့ အတူတူလောက်နီးနီးပါပဲ…
ထွက်ရခြင်း Source ကို ပြန်ပေါက်မှာပဲစိုးသလား…
နောက်ပိုင်း အလုပ်သစ်က History လိုက်ရင် ကိုယ့်အထက်လူကြီးရဲ့ Recommendation ကိုပဲ ကြောက်သလား…။
ကျန်ခဲ့သူတွေနဲ့ နောက်ပိုင်းဆက်ဆံဖို့ခက်မှာပဲ စိုးသလား မသိပါ…။
Exit Interview ထိ လိမ်လည်ပြောခြင်းသည် Myanmar Culture တစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်နေပြီထင့်…
အဲ့ရာ HR ညံ့လို့ …အဟိဟိ … အဲ့မျိုးက ထွက်မယ့်ဝန်ထမ်းကပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေက ..ကွန်ဖီဒန်ရှယ်ခင်ည … ကျော်တို့ အရင်အဲလိုင်းက HR မန်နေဂျာမမ များတော့ အဲ့ result ကို CEO ကို တိုက်ရိုက်ရီပို့ပေးတယ်ခင်ဗျ … ဆိုတော့ကာ ပြင်သင့်တာလား ..ထွက်မယ့်ဝန်ထမ်းလိမ်တာလားဆိုတာမျိုး ( ထွက်ခါနီး ထွက်ခတ်ခတ်တတ်တာမျိုးရယ် ) ဆိုတာလေး ..ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ဌာနမှုးနဲ့ ပြန်စစ်တယ်ခင်ဗျ.. ပြီးမှရလာတဲ့ outcome တခုကို မှတ်တမ်းတင် ..အနာဂါတ်မှာပြန်ပြင်ဆင်တတ်သဗျ….မန်နေဂျာနဲ့ ၀န်ထမ်း ကြားထဲက နားလည်မှု ဆုံမှတ်တခုကို အနာဂါတ်မှာ ဖန်တီးနိုင်မယ်ပေါ့ဗျာ…ကျော့်ဆရာ ဂီဂီဆိုရင်ဖြင့် ပိုရှင်းပြနိုင်မလားပဲ …( မှတ်ချက် ။ ကြပ်တာမဟုတ်ပါ..အတည်..အဟိဟိ )
Outcome တွေကို အနာဂတ်မှာ ပြန်ပြင်ဆင်လို့ ရမယ်ဆိုရင်…
ဒီတစ်ဝင်းလုံးးးးးး မြေပါ လှန်ပစ်တောင်…အခါ ၂၀ ကျော် လှန်ရမယ်….
Depend on Decision Makers
ဒီထဲက တစ်ယောက် စိတ်နာနာနဲ့ ပြောသလိုပဲ
ကိုယ်က ထွက်ချင်လို့ကို ထွက်မှတော့ နောက်ကြောင်းပြန် စဉ်းစားမနေနဲ့တော့ ၊
လာမယ့် အလုပ်အသစ်အတွက် အဘက်ဘက်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပေါ့ ၊
ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း ဘာပဲလာလာ ခေါင်းမော့ထားပါ ကောင်းကင်ပြာ ၊
Absolutely Right!!!! အူးမျိုး
ဟူး.. ဒီရက်ပိုင်း သများလူကြမ်းမကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စပေါ့..
အကြောင်းမဲ့ စိတ်ဖိစီးနေတယ်.. အကြောင်းမဲ့ဒေါသထွက်နေတယ်.. အားအားရှိ မျက်ရည်ကျချင်နေတယ်.. ကိုယ့်အသားနာရမှာ သေမလောက်ကြောက်တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုကိုယ် တစ်ခုခုလုပ်ချင်နေတယ်..
အဲ့လိုအချိန်မှာ ရုံးမှာလည်း အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေသပေါ့..
အလုပ်ထွက်ချင်တာမှ တစ်ပိုင်းကို သေနေတာပဲ.. ဘာလို့လဲဆိုရင် မပျော်တော့တာလို့ပဲ ပြောရမယ်… တစ်ရုံးလုံးက ငုံ့ခံနေတဲ့ (ကိုယ့်အမေအသက်လောက် ရှိတဲ့) သူနဲ့ ဖြစ်တာဆိုတော့လေ… မတရားဘူးထင်ရင် ငုံ့မခံတတ်တော့ သူဌေးကို ပြောပြလိုက်တယ်… (မပြောရင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေဦးမယ်)… ဆိုတော့… စည်းကမ်းတွေကို တရားသဖြင့် ပြန်သတ်မှတ်ပေးတော့.. အလုပ်ထွက်စာတင်လိုက်တဲ့ သများမှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး.. သူကလည်း ချုပ်တတ်တယ်.. ဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာကို ချိတ်ထားပြီးရင် သွားပါတယ်.. မဟုတ်ရင်တော့ မထွက်ပါနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ့်မှာ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး..
ခုတော့ သူများတွေ ဘာပဲထင်ထင် မှန်တယ်ထင်တာကို လုပ်ထားတာဆိုတော့ ဂရုမစိုက်ဘူး.. (မတရားတာသာ သူဌေးကိုပြောတာလေ.. ကိုယ်က ဘယ်သူ့ကိုမှ ချွန်တွန်းမလုပ်ဘူး..) ကတိစကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဒီမှာတော့ နှစ်ကုန်အထိ ဆက်နေရဦးမယ် ထင်ပါရဲ့.. အလုပ်ထွက်နေကြတဲ့သူတွေကိုမြင်ရင် အားကျတယ်..
တကယ်လဲ..မဝေအပေါ်က ပြောခဲ့သလို ခေါင်းမော့ပြီးထွက်ဖို့ အချိန်ယူ ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်…။
ကိုယ်နောက်သွားမယ့် နေရာကို စိတ်ကြိုက်ရွေး၊ စိတ်ကြိုက်လေ့လာပြီး အဖက်ဖက်က ခုထက်သာရင်တော့ ကိုယ့်တိုးတက်ရာအတွက်…ပြောင်းသင့်တယ်လို့ ကောင်းကင်ပြာ ထင်တယ်…
ကိုယ်က ထွက်ချင်လို့ကို ထွက်မှတော့ အားလုံး good bye ဘဲ